Ntuziaka maka ịchịkwa The Quenching Distortion Of Forged Gears-Industry News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Ntuziaka maka ijikwa mgbagha na-emenyụ nke ngwa akpara akpa
Oge: 2021-08-10 HITS: 11
Imenyụ nke esorowo gia bụ isi njikọ na-akpata mgbagha. Ụzọ bụ isi iji chịkwaa ndakpọ ndakpọ bụ ime ka akụkụ niile nke ngwa ahụ dị jụụ dịka otu o kwere mee. Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ ihe dị mkpa:
1. Mmetụta nke hardening nke ígwè n'onwe ya na mgbagwoju anya.
Nke dị elu nke siri ike nke ígwè ahụ, ka ụda olu na-etinye aka na mgbanwe nke nhazi ahụ. Mgbe workpiece na-agbasi mbọ ike na dum bụ martensite, olu dị iche n'etiti tupu na mgbe quenching ruru kacha, na olu mgbanwe nke ígwè na 1% carbon ọdịnaya bụ banyere 1%; ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ọkara nke ndị siri ike, ya bụ, ọkara nke ụda na-emenyụ n'ime martensite , Ọdịiche dị iche iche n'ihu na mgbe emechara ga-abụ okpukpu abụọ dị ka nke mbụ. Ya mere, ka nta na hardenability, nta nke quenching mgbagwoju anya. N'ụzọ megidere nke ahụ, nhụsianya na-ebelata nke ngwa ngwa adịgboroja ka ukwuu.
N'ọtụtụ ngwo arụrụ arụ, iji dozie nsogbu mgbagwoju anya, a na-ejikarị usoro ibelata ike nke isi. Otú ọ dị, n'ịtụle ike nke ngwa ahụ, ike nke isi ahụ enweghị ike ịdị oke ala, n'ihi na ihe dị mkpa maka ọdịda ike ọgwụgwụ nke ọtụtụ gia bụ ntụgharị nke isi ike. Ya mere, nke a aghọwo ihe na-emegiderịta onwe ya na mmepụta ngwa. Iji dozie esemokwu dị n'etiti ike gia na mgbagha ọgwụgwọ okpomọkụ na ihe siri ike chọrọ nke isi gia, ike siri ike nke ígwè ga-abụ nke ọma.
Nnwale na-egosi na ọ bụrụhaala na ike ike (ma ọ bụ isi ike) nke ígwè ahụ yiri ya, mgbagwoju anya ahụ dịkwa otu, nke na-enye ọnọdụ dị mma maka ịchịkwa mgbagwoju anya. N'ihi na gia quenching distoration, larịị nke hardening nke ígwè dị mkpa, ma ihe ka mkpa bụ bandwit nke ígwè hardenability, ya bụ, ogo fluctuation nke hardenability. Ọ bụ kpọmkwem n'ihi na ike siri ike nke ígwè dị mkpa dị ukwuu maka nkwụsịtụ nke ngwa ngwa, mba niile etinyela ike n'ime ụkpụrụ ígwè. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, obosara nke eriri ndị nwere ike ime ka agbatịkwuru. Dị ka ihe atụ, German "Technical Conditions for Delivery of Carburized and Hardened Steels" ọhụrụ akwadoro warara hard hardable steels, na bandwit e belatara site na 8 HRC nke nkịtị hardening steels ka 5 HRC. Ọkọlọtọ ọhụrụ nke obodo anyị wepụtara na 2004 belatara obosara nke band ahụ nwere ike ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ mbụ.
2. Ịkwụsị nrụgide mmanye.
Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe eji arụ ọrụ arụrụ arụ ụlọ na-akwado ịkwụsị n'efu n'echiche, iji mee ka usoro ahụ dị mfe, mee ka ọrụ dị mfe ma belata ọnụ ahịa. Mmepe nke teknụzụ na-amanye imenyụ ọkụ emetụtawokwa nke ukwuu. N'ụzọ dị mwute, ọ na-esi ike ịchịkwa mgbagha nke gia nwere ihe owuwu pụrụ iche dị ka bevel gia site free quenching. Ruo ọtụtụ iri afọ, mgbagha nke bevel gia emekpala ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ akụrụngwa nke obodo m nsogbu. N'ezie, na okpomọkụ ọgwụgwọ mmepụta, n'ihi na ekwe distortion nke workpieces dị ka obere ighikota drills na mkpa mkpara, onye ọ bụla na-aghọta na ojiji nke nrụgide straightening nweta mụ uka mmepụta; na maka ngwo dị gịrịgịrị na nnukwu mgbidi na-emepụta na ngwa ngwa adịgboroja. Maka akụkụ dị ka diski bevel gears na auto synchronizer gear sleeves, iji pịa quenching nwekwara ike iwepụ ma ọ bụ belata mmetụta nke ihe dị iche iche nwere ike ịgbagha dị na usoro mmepụta na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ n'okpuru nrụgide siri ike. Ọnụ ego a na-akwụ maka ịkwụsị n'efu dị nnọọ ala. Ya mere, ikpochapụ mmanye ebipụta kwesịrị ịbụ usoro dị mkpa na nke dị mkpa.
N'oge na-adịbeghị anya, a kpụrụ akpụ akpụzi usoro hardening induction na mba ofesi maka ike siri ike nke ngwa pụrụ iche, ọkachasị bevel gears na synchronizer gear sleeves, wee nweta nsonaazụ dị egwu. Usoro ọhụrụ a na-ejikọta uru nke induction hardening na compression hardening, nke nwere ike ibelata mgbagwoju anya, ma nwee ike ibelata ma ọ bụ kpochapụ usoro ndị na-esote. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na a na-eji coolant dabere na mmiri mebie hardening induction, ngwo ahụ mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ adịghị mkpa ka ihicha ya. N'otu oge ahụ, inductor wuru n'ime enweghị ike iji ya mee ihe maka ikpo ọkụ na ikpo ọkụ, kamakwa maka ikpo ọkụ na akụkụ ọkụ na-enweghị ngwá ọrụ ndị ọzọ, n'ihi ya, ọnụ ahịa mmepụta na-ebelata nke ukwuu.
Ronsco nye Nickel Alloys & Pụrụ Iche Alloys High Precision Forgings, Top 10 Nrụpụta Ọpụrụiche Na Aerospace Forgings na China.
● 25 afọ ahụmahụ na elu okpomọkụ alloy emeputa.
● Ndị otu ọkachamara ọkachamara.
● 8 tọn VIM + X tọn VAR.
● Top 10 aerospace forgings.
● Onye na-ebupụta ihe ndị injinia akpụrụ akpụ nke Rolls-Royce.